सरकार म आउने बेलासम्म घरमा आमा, बहिनि र छोरी सुरक्षित त हुन्छन् ?' - eNepal
सरकार म आउने बेलासम्म घरमा आमा, बहिनि र छोरी सुरक्षित त हुन्छन् ?’
जापानबाट परदेशी चेलीको प्रश्न-‘सरकार म आउने बेलासम्म घरमा आमा, बहिनि र छोरी सुरक्षित त हुन्छन् ?’
कतातिर मोडिदैछ हाम्रो देश ? छि…हाम्रो देश भन्न पनि घिन लागेर आउँछ । धर्म, नैतिकता अनि संस्कृति किन बदलिदै छ ? मानबबाट दानब बन्ने सोचहरु किन बढ्दैछ मान्छेमा ? अब त यस्तो लाग्दैछ कि छोरि भएर जन्मलिनु कसैको क्षणिक उत्तेजनाको स्वार्थ पूरा गर्नु हो । कसैको थकाई मेटाउने चोैतारि हौं हामी । धिक्कार छ यस्तो सोच्न बाध्य बनाउने पुरुष रुपी ति कुरुप दानविय मानवहरुलाई ।
आशको पोको बाडेर बर्षौ बिताई दिने देश-…
एकदिन सबैले मर्नुनै छ । ए…नरपिचासहरु तिमिहरुमा अलिकति मानवियता, नैतिकता र डरपनि भएन है जन्मिंदैका कोपिलालाई चुडेर अस्तित्व मेटाउँदा । फक्रनै नपाएका रजस्वला हुँदा आउने रगतको अर्थपनी थाहा नपाएका कोपीलाहरुलाई रगताम्मे पारेर हत्या गर्दा तिमिले आमा, दिदि बहिनी वा आफ्नी जिवनसंगीनिको कतै छायाँ पनि देखेनौ है ?
साभारः जापान समाचार
सबै सिड्नीवासीहरूलाई निर्मला पन्तको न्यायको लागी मौनवर्त बस्न आवहान ।
नझुक्किनुस्, तपाईँले भोट हाल्दैमा मिस वर्ल्ड नेपालले जित्ने चाँही हैन
ल्याउन पर्ने काम गरेर खाने खाल्कि रहेछ आफु भने रुपमती खोज्दै हिडे
उस्तै परे नेपाली भेट भए बोल्न पनि हिच्कीचाउँछन् अस्ट्रेलीया छिरेका नेफोलीहरु
भाँडा हान्छ अस्ट्रेलियामा भन्दै गर्दा त्यहि भाँडा हान्ने काम नपाउदाको पिडा कता गएर…